Zvigadzirwa zvakajairwa uye maficha
1. Chikafu chekudyisa
2. Kufa-kutema unit
Pneumatic kukiya system inoita nyore nyore kukiya-kumusoro uye kusunungura kwekucheka kudzingirira uye kucheka ndiro.
Pneumatic yekusimudza ndiro yekucheka nyore nyore mukati nekunze.
Centerline sisitimu pane yekufa-yekucheka kumhanyisa ine transversal micro kugadziridza kunova nechokwadi kunyoreswa kunoguma nekukurumidza basa shanduko.
Kumira kwakarurama kweKucheka kumhanyisa kunodzorwa neakarurama ma sensors ane otomatiki cheki-yekukiya mudziyo
Kucheka kudzingirira mutero mudziyo
Motorola mota huru inodzorwa neSchneider inverter.
Micro-kugadzirisa yekucheka simba, kumanikidza kurongeka kunogona kusvika ku0.01mm, Max. kufa-kucheka kumanikidza kunogona kusvika kumatoni mazana matatu - nehonye giya rinotyairwa neservo mota uye rinodzorwa zviri nyore ne15 inch inobata skrini.
Crankshaft inogadzirwa ne40Cr simbi.
HT300 ductile simbi yemuchina mafuremu uye maplatens
7 seti yemabati ekubata ane grippers akagadzirwa akareruka uye anogara kwenguva refu aruminiyamu chiwanikwa ine Ultra yakaoma jasi uye anodized kupedzisa kuve nechokwadi uye kunoenderana mapepa kunyoreswa.
Yakakwira mhando gripper bar kubva kuJapan ine hupenyu hwakareba
Yakasarudzika yakagadzirirwa gripper bar haidi spacer yemubhadharo wechokwadi inishuwa pepa kunyoreswa
Kucheka mahwendefa eakasiyana hukobvu (1pc ye1mm, 1 pc ye3mm, 1 pc ye4mm) kuitira nyore basa-shanduko
Yakakwira mhando Renold cheni kubva kuEngland ine pre-yakawedzerwa kurapwa inovimbisa kugadzikana uye kunyatsoita mukufamba kwenguva.
Yakakwira yekumanikidza index drive drive ye gripper bar yekumisa kutonga
Zadzisa dziviriro mudziyo ne torque limiter inogadzira yakakwira nhanho yekuchengeteka kweanoshanda uye muchina.
Otomatiki lubrication uye kutonhora sisitimu huru uye otomatiki lubrication yekona cheni.
3. Foil Tsikwa Chikwata
Mumwe nemumwe inodzorwa programmable foil kudhonza ma roller (3 seti in longitudinal uye 2 seti mukutenderera nzira) inotyairwa neYASKAWA servo motors
Yakareba yakazara fomati firipi yekudyisa sisitimu yekutsika munzira mbiri panguva imwechete iyo inobatsira zvakanyanya mukuchengetedza mafirita pamwe nenguva yekuchinja mafirosi.
20 yega yega inodzorwa kupisa nzvimbo, uchishandisa intubation kudziyisa system, ine shiviriro mukati me ± 1C
(1) seti yeductile simbi yezinga rekumhanyisa uye yekukiya chishandiso cheanofa
Gara nguva yekushandisa yenzvimbo hombe yekutsika
(2) nhungamiro yemhepo ichivhuvhuta kupatsanura mudziyo
Iyo brashi system inobvisa yakashandiswa foil kubva kudivi remuchina, uko kwainogona kuunganidzwa nekurasa.
Optical sensors kuona foil kutyorwa.
Opsioneel foil rewinder WFR-280 kurasa yakashandiswa foil, gonesa mafiripi kuti akakuvadzwa pamatanhatu akazvimiririra miseve mune yakatsaurwa module.
4. Chikwata Chekutumira
Adjustable braking brashi inodzorwa ne AC mota rubatsiro kuburitsa bepa kubva kubatisisa uye kuunganidza mapepa mune yakakwira kumhanya uye kuenderana kwakakwana.
Dhirivhari murwi kukwirira kunosvika 1350mm.
Photoelectric zvishandiso zvinodzivirira kupfuura-kukwira uye pamusoro-kuburuka kwekutakura mapepa murwi
Pile inogona kuverengerwa neanoratidzira sensor (yakajairwa) uye iyo unit inogona kubatanidzwa pamwe neyakagadzirwa yekuisa mapepa mapepa mumurwi (sarudzo). Izvo zvichaita kuti zvive nyore kubvisa mabhureki uye kurongedza iwo muzviitiko.
Muchina wese unogona kugadziridzwa ne10,4 inch touch tarisisa kumashure kweshure
Yekubatsira kuendesa rack inogadzirirwa yekusamira-kuendesa.
5. Magetsi Zvikamu
Magetsi michina, mashoma akachinjika uye mafotoelectric maseru anodzorwa nePLC pamushini wese
Elektroniki cam switch uye encoder
Ese makuru mashandiro anogona kuitwa ne15 uye 10.4 inch kubata kubata tarisisa.
PILZ chengetedzo relay seyakajairwa simbisa yepamusoro kuchengetedza.
Yemukati yekuvhara-yekukiya switch inozadzisa zvinodikanwa zveEC.
Inoshandisa zvikamu zvemagetsi zvinosanganisira Moeller, Omron, Schneider relay, AC inosangana neyemhepo breaker kuvimbisa kugadzikana mukufamba kwenguva.
Otomatiki kukanganisa kuratidza uye kuzviongorora.
Kushanda chikuva ine kudziyisa controller
1 seti yematurusi bhokisi uye rekushandisa bhuku
Saizi saizi （Max）1060X760mm
Saizi yekucheka-yekucheka （Max）1045X745mm
Kutsika saizi （Max) gumi20X740mm
Kufa-kucheka kumhanya （Kuwanda) 7500（S / H.）
Kutsika kumhanya (Makore) 6500 (S / H)
Hologram Yekumhanyisa Speed (Makore) 5500 (S / H)
Pepa （Min)90-2000g / m2 kadhi bhodhi, 0.1--3mm
Corrugated board (chete mukufa-kucheka) Mm4mm, E、B nyere
Max kufa-kutema kumanikidza 320Toni
Kuchenesa nzvimbo Kupisa nzvimbo, temp. 20℃--200℃
Adjustable gripper margin 7-17mm
Kureba kwemurwi kukwirira （Max）1600mm
Dhirivhari murwi kukwirira （Max）1350mm
Main mota simba 11KW
Simba rese 46KW
Huremu hwese 19Matoni
Rokunze rondedzero yezvinhu zvakakosha
Chikamu Zita Brand Nyika Yakatangira Dzokorora
Kubereka NSK Japani
Kubereka SKF Swiss
Elec-magineti vharafu uye pneumatic zvikamu SMC Japani
Index bhokisi Taiwan
Monitor Sharp Japani
Main Gripper Chain Renold UK
Pombi yepombi Becker ChiJerimani
Die-kutema furemu China Yakabatanidzwa kuumbwa
20 yega inodzorwa kupisa nzvimbo ChiJerimani Kuchenesa tube
Servo mota yeiyo foil roller Yaskawa Japani
Chinjana chekufambisa Japani
Main mota inverter Schneider ChiJerimani
Main mota Nokia ChiJerimani
Endesa bhandi Nitta Japani
Bhatani uye zvemagetsi zvikamu Eton ChiJerimani
Hydraulic yekuisa chisimbiso mhete ChiJerimani
Torque muganho Taiwan
Air mudariki, contactor uye vadyi Schneider, Eton, Moeller ChiJerimani
Safety ataure PILZ ChiJerimani
Nyanga yemagetsi Patlite Japani
Crank shafts China 40 Cr kuomesa Kupisa Kurapa
Tsvimbo yehonye China 40 Cr kuomesa Kupisa Kurapa
Honye Gear China Mhangura
Dzorerazve zvikamu zvese
Zinga rehuchi dzinga = 1 pcs
Kucheka kudzingirira = 1 pcs
1mm kucheka ndiro = 1 pcs
3mm kucheka ndiro = 1 pcs
4mm kucheka ndiro = 1 pcs
Gripper bar = 1 pcs
Gripper zino = 5 pcs
Zvingasarudzika zvikamu zvekusarudza (zvisina kuiswa mumutengo wakataurwa)
Supersonic Double-jira Detector
Feeder / kuendesa nzvimbo static kubvisa
Yakabatana foil rewinder
Pneumatic yekubvisa chimiro
Zinga rehuchi dzinga = USD $ 3,000.00
1mm kucheka ndiro = USD $ 300.00
3mm kucheka ndiro = USD $ 800.00
4mm kucheka ndiro = USD $ 800.00
(Inogona kungoshongedzerwa mu 2 Inopindirana foil kudyisa mugodhi system, kwete ye2 nzira yekudyisa)
Pashure: GUOWANG T-1060BF KUFA-KUCHENGA MACHINE NEMAHARA
Zvadaro: GW PRECISION SHEET CUTTER S140 / S170
Yakasarudzika Hot Hot Foil Stamp
Ndarama Inopisa Foil
Hot angazvidzvisa ichivharira
Hot Foil nekusimbisa, nebefu
Yakatsva Goridhe Foil Kudhinda
Kupisa Stamping Press
Sirivha Hot Kutsika